आमिर खानकी तेस्री श्रीमतीले किन भनिन यस्तो – हिरोईन बन्ने हो भने ठुलाबडा संग एक रा'त सँगै सु'त्नु पर्छ –
February 14, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on आमिर खानकी तेस्री श्रीमतीले किन भनिन यस्तो – हिरोईन बन्ने हो भने ठुलाबडा संग एक रा’त सँगै सु’त्नु पर्छ
बलिउड इन्डस्ट्रीकी उत्कृष्ट अभिनेत्री फातिमा सना शेख चलचित्र जगतकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । उनले बलिउडका धेरै फिल्ममा काम गरिसकेकि छिन् । नायिकाले बलिउडका धेरै ठूला स्टारसँग काम गरिसकेकी छिन् । अभिनेत्री सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै सक्रिय छिन्। उनी हरेक दिन केहि वा उत्कृष्ट पोस्टहरू साझा गरिरहेकी छिन्। उनको यो पोस्टलाई फ्यानहरुले निकै मन पराएका छन् ।
उनको पोस्टमा फ्यानहरुले लाइक र कमेन्ट गरेका छन् ।यसैबीच उनको एउटा खुलासा निकै भा इर ल भइरहेको छ । जसमा उनले बलिउडसँग सम्बन्धित धेरै खुलासा गरेकि छिन् ।फातिमा सना शेखको नाम मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानको नामसँग जोडिएको छ । साथै, फातिमा चाँडै आमिरकी श्रीमती बन्न सक्ने र दुबैले चाँडै नै वैवाहिक जीवन सुरु गर्ने खबरहरु आइरहेका छन् ।
अब यसमा कति सत्यता छ त्यो उनीहरुलाई मात्र थाहा होला ।तर आज हामी फातिमासँग सम्बन्धित खुलासाहरूबारे बताउन गइरहेका छौं। उनी भन्छिन्, ‘यदि केटीलाई चलचित्र क्षेत्रमा नायिका बन्ने हो भने ठूला मान्छेसँग रात बिताउनु पर्ने हुन्छ । ठूला व्यक्तिले बालिकाको असहायताको फाइदा उठाएर यी सबै माग उनीहरुको अगाडि राख्ने गरेको उनले बताईन् ।
एकै समयमा, धेरै केटीहरू तिनीहरूको जालमा पर्छन् र यो पनि गर्छन्। त्यसपछि उनले केही भनिन् जसले सबैको होश उडायो । अभिनेत्री फातिमा सना शेखले आफूलाई पनि यस्तो भएको बताइन् ।फिल्म क्षेत्रमा नआउदा ठूला–ठूला व्यक्तिबाट अफर आउने गरेको उनले आफूसँग रात बिताउने मौका पाएको बताईन् । उनीसँग सुतेपछि ठूला प्रोजेक्ट पाइन्छ भनिएको थियो ।
तर फातिमाले यसबारे सोचिन् र अस्वीकार गरिन् । उनी भन्छिन् आफ्नो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आत्म-सम्मान हो। यसपछि फातिमा सना शेखले बलिउडमा पाइला राखिन् र एकभन्दा बढी फिल्म गरिन् । जसलाई फ्यानबाट निकै माया मिलेको छ भने अर्कोतर्फ अभिनेत्री फातिमा सना शेखको वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने उनी छिट्टै ‘साम बहादुर’ र ‘लाइफ इन अ मेट्रो’को सिक्वेलमा देखिने भएकी छिन् ।
फातिमा फिल्म ‘साम बहादुर’ मा अभिनेता विक्की कौशलको अपोजिटमा देखिनेछिन् । योसँगै अभिनेत्री ‘लाइफ इन ए मेट्रो सिक्वेल’ मा राजकुमार रावको अपोजिटमा देखिनेछिन् । उनको यो पोस्टको फ्यानहरु उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन् ।
म्यादी प्रहरीको तलब तोकियो, १ लाख १८ हजार भ’र्ना खोल्ने तयारी….
अफ्रिकनले नेपाली गीत ‘फूलबुट्टे सारी’ गाउदा सामाजीक संजालमा एका एक भयो भा’ईरल ! अनुमति नलिइ गाइएको भन्दै मु’द्दा …(भिडियो)